Shirka Maanta Doorashada looga hadlayo ee ka furmaya Muqdisho – XAMAR POST
Shirka Maanta Doorashada looga hadlayo ee ka furmaya Muqdisho
By Mohamed Abdi On May 20, 2021
Waxaa maanta oo Khamiis ah sida lagu wado Muqdisho ka furmaya gaar ahaan Xerada Xalane Shirka loo ballansanaa ee wadatashiga Arimaha Doorashada looga hadlayo.
Inkastoo Madaxda Dawlad gobolleedyada badankood aysan imaan Muqdisho hadana Axmed Cabdi Kaariye (Qoor qoor) ayaa xalay maqribkii soo gaaray Muqdisho waana mas’uulkii ugu horeeyey ee shirkaasi ka qeyb galaya soona gaara Caasimada.
Saaka waxaa la filayaa in Madaxweynayaasha HirShabelle iyo KGS ay kasoo deggaan Muqdisho,sidaas si lamid ah Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa saacado kadib kusoo wajahan Xamar.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo xalay fiidkii qoraal uu soo saaray kaga hadlay Arimaha Shirka maanta furmaya waxa uu yiri:
Waxaan Udiyaar garownay Shirka Golaha wadatashiga Qaran Ee dhameystirka Arimaha Doorashooyinka.
Waxaan filayaa in si habsami leh noogu furmo shirka,guulna noogu dhamaado si uu dalka doorasho u aado daah furnaan heshiis lagu yahayna ku dhacda.
Rooble ayaa sidoo kale waxa uu yiri “waxaa iga go’an fududeynta wax kasta oo horseedi kara inuu shirka guuleysto.
Ra’iisal Wasaaraha xukuumada ayaa gaba gabadii qoraalkiisa ku yiri:
Siyaasiyiinta iyo Shacabka Soomaaliyeed waan uga mahad celinayaa taageeradooda,dedaalada aan wadno waxaana ka codsaneynaa in nala garab istaago,isagoo eebe ka rajeeyey in shirka iyo howlaha ufududeeyo.
Beesha Caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ka dhursugaya waxa kasoo baxa shirkaasi maanta la filayo in muqdisho ka furmo iyadoo ay macquul tahay in dib uga dhaco maanta ilaa berri maadaama ay madaxda weli badankood soo gaarin Caasimada Muqdisho.
Wiil Tiktok muuqaal soo geliyey oo lix sano lagu xukumay markii..
DHAGEYSO: Liiska Wasiirada Cusub Jubbaland Oo Lagu dhawaaqay